Indawo entle yeT2 eMenetou Salon
Yokuhlala Beautiful entsha yangaphambili abefundisi of Menetou Salon (imizuzu eli-15 kuphela ukususela Bourges), linempahla sisimbo wanamhla, kunye lokulala, kukho ikhitshi bexhobile, indlu yangasese kunye ishawa kwigunjana, igumbi abahlala kummandla ofisi, flat screen TV nge ukufikelela free WiFi.
Indawo engatshaywayo kwaye ayifikeleleki kwizilwanyana.
Kummandla okufutshane: iivenkile zokutyela ezi-2 (kubandakanywa ne "Cheu L'Zib"), ikhefi, iibhakabhaka ezi-2, ushicilelo lwecuba, i-delicatessen-caterer, ikhemesti kunye neofisi kagqirha.
Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka ePlace de l'Eglise, phambi kwesakhiwo.
Irenti ibandakanya: ukufudumeza, ukucocwa kunye nokunikezelwa kwamaphepha kunye neetawuli.
I-420m2 gîte entsha kwindawo eyayisakuba yiPresbytery yaseMenetou Salon (imizuzu eli-15 kuphela ukusuka eBourges), phantsi kokulungiswa, kuquka namagumbi asi-7:
2 T3 esihle, 3 T2 kunye Studios-2, linempahla sisimbo wanamhla, bonke nee-ikhitshi ebizayo, lokuhlambela kunye ishawa kwigunjana, ummandla ofisi, isikrini TV flat kwaye axhotyiswe kunye nokufikelela WiFi free.
Kubandakanya: ukufudumeza, umoya we-air conditioning kumagumbi aphezulu, ukucocwa kunye nokunikezelwa kwelinen yebhedi kunye neetawuli.
4.78 ·Izimvo eziyi-19
4.78 · Izimvo eziyi-19
Ilali yaseVineyard idume ngomgangatho wobomi bayo, imizuzu nje eli-15 ukusuka eBourges.
I-Presbytery ibekwe kumganyana welitye ukusuka eChâteau de Menetou Salon.
Kummandla okufutshane: iindawo zokutyela (kubandakanywa "iCheu L'Zib" kunye neLe Fluteau), iivenkile, ikhemesti kunye neofisi kagqirha. Indawo yokupaka iyafumaneka ePlace de l'Eglise.